क्यानाडाको मृत्युको दण्डको इतिहास
क्यानाडामा राजधानी सजावटको इतिहास
क्यानाडामा राजधानी सजावटको उन्मूलनको समय
क्यानाडाको आपराधिक संहिता 1976 मा क्यानाडाको आपराधिक संहिताबाट हटाइएको थियो। यो एक अनिवार्य जीवन सजाएको साथ प्रतिस्थापित भएको थियो बिना सबै प्रथम-हप्ताको हत्याको लागि 25 वर्षको लागि पालियो। 1 99 8 मा राजधानीको सजाय पनि क्यानाडा राष्ट्रिय सुरक्षा अधिनियमबाट हटाइएको थियो, क्यानाडाको सैन्य कानून क्यानाडामा सिविल कानुनको साथमा ल्याउन। यहाँ पूंजीको सजावटको विकास र क्यानाडामा मृत्युको सजावटको उन्मूलनको समयरेखा हो।
माथिल्लो र लोअर क्यानाडामा मृत्यु, सजाय र बलात्कारको अपराध मृत्युदण्डको सजाय भयो।
हत्या राजधानी र गैर-राजधानी अपराधमा वर्गीकृत गरिएको थियो। क्यानाडामा क्यापिटल हत्याको अपराध कर्तव्यको बेलामा प्रहरी अधिकारी, गार्ड वा वार्डनको हत्या र हत्याको पूर्वनिर्धारित गरियो। एक राजधानी अपराध ह्याङ्किङ्गको अनिवार्य वाक्य थियो।
1962
क्यानाडामा अन्तिम मृत्यु एक अनौपचारिक हत्या र रैकेट अनुशासनमा साक्षी र अर्घाखाँचीको अभियुक्त हत्याको आरोप लगाईएको आर्थर लुकास र प्रहरीले अभियुक्तलाई पक्राउ नगरेको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ गरेको डन जेलमा टोरन्टोमा ओन्टारियोियो।
क्यानाडामा क्यापिटल सजायले ड्यूटी पुलिस अफिसर र कैदी गार्डको हत्या गर्न सीमित थियो।
क्यानेडियन आपराधिक संहिताबाट राजधानी सजाय हटाइएको थियो। यो अनिवार्य जीवन वाक्यको साथ प्रतिस्थापित गरिएको थियो बिना कुनै पनि प्रथम-डिग्री हत्याका लागि 25 वर्षको लागि पालोको सम्भावना।
यो बिल हाउस अ कमन्समा निःशुल्क मतदान भएको थियो। क्यान्सर र उत्परिवर्ती सहित सबैभन्दा सशस्त्र सैन्य अपराधहरूका लागि क्यानेडियन राष्ट्रिय सुरक्षा अधिनियममा कैपिटल सजावट अझै बाँकी रहेको छ।
राजधानी सजाय पुनः सुरु गर्न एक गति क्यानडाई हाउस कमन्समा छलफल गरिएको थियो र नि: शुल्क मत हरायो।
क्यानाडा नेशनल डिभिजन एक्टलाई मृत्युदण्ड को हटाउन को लागी बदलयो र 25 वर्ष को लागि पैरोल को लागि योग्यता संग जिंदगी कैद को बदलन को बदले। यसले क्यानाडाको सैन्य कानून क्यानडामा सिविल कानुनको साथमा ल्याएको थियो।
क्यानाडाको सर्वोच्च न्यायालयले संयुक्त राज्य अमेरिका विरुद्ध बर्न्समा शासन गरेको थियो, कि अभियोजन घटनाहरूमा यो कानुनी रूपमा आवश्यक छ कि "सबै असाधारण मामलाहरूमा" क्यानाडा सरकारले आश्वासन पाउनेछ कि मृत्यु दण्ड लगाईनेछ, वा यदि लागू हुँदैन ।
केनेडालीहरूले कुन भाषा बोल्छन्?
क्यानाडा हाउस ओफ कमन्स प्रश्न अवधि को समयमा के हुन्छ?
क्यानाडा सेन्टरहरूको वेतन
क्यानाडाको संसद बुझ्दै
एडमन्टन को बारे मा प्रमुख तथ्य, अल्बर्टा को राजधानी
क्यानाडा आयकर प्याकेज कहाँ प्राप्त गर्ने
एक संसदीय सरकार कसरी काम गर्दछ?
क्यानाडाली संघीय चुनावमा कसले रोज्न सक्छ
क्यानाडामा बाल कार सुरक्षा
पलियनयाया टमामेन्टोस व्यवस्थापन र व्यवस्थापन गर्ने
जीवन र कला जॉन सिंगर सर्गेंट
मधुमक्कै प्रलोभिस भनेको के हो?
पश्चिमी क्यारोलिना विश्वविद्यालय प्रवेश
केली क्लार्कसन जीवनी र प्रोफाइल
सीट बेल्टको इतिहास
रक संगीत: यसको उत्पत्ति र इतिहास
EB 'झीलमा एकपटक थप' का व्हाइट ड्राफ्ट
ज्योतिष पठन कार्ड
किन O2 बराबरको शून्यको गठनको मानक Enthalpy?
El Dorado को बारे मा दस तथ्य
के कारण चलिरहेको छैन कुनै क्रेन छैन?
नि: शुल्क ऊर्जा र दबाव उदाहरण समस्या
के Sharpie टैटू सुरक्षित छ?
फ्रान्कोमा बर्तन मूल्यहरू र मूल्यहरू
मरियम जे ब्लेगेको शीर्ष 10 सबैभन्दा ठूलो हिट्स
शुरुआती र व्यवसायका लागि सर्वश्रेष्ठ चित्रकारी पेंसिल
एक पवित्रता र एक पवित्र को बीच अंतर के छ?
आइयाड बुक XXIII को सारांश
वृश्चिक राइजिंग, म्यागनेटिज्म को एक चिन्ह
सिडरेवल मासिक बनाम चंद्र महिना (सिकोडिक)
कला इतिहास 101 - ग्रीक आर्ट